Paulo Coelho မှ "Alchemist" အော်ဒီယိုစာအုပ်ကို ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Paulo Coelho မှ“ Alchemist” စာအုပ်၏အသံကိုသင့်အားကျွန်ုပ်ချန်ထားခဲ့သည် လူ့အသံ (စက်ရုပ်မဟုတ်) ဖြင့်အဓိက။
၄ ပိုင်းခွဲထားတယ်။ ၂ နာရီနှင့်မိနစ် ၄၀ တွင်သင်ပြီးအောင်လုပ်သည်။ သင်ထပ်မံတောင်းခံနိုင်ပါသလား?
(ဒီကစားသမားကို Mozilla Firefox သို့မဟုတ် Google Chrome ဘရောင်ဇာများနှင့်သာပြသမည်၊ အကယ်၍ သင်သည်အင်တာနက်စူးစမ်းရှာဖွေသူကိုအသုံးပြုလျှင်သင်မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်)
* "Alchemist" ဘဝခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောကံကြမ္မာဆီသို့အဆက်မပြတ်တွန်းပို့နေသည့်ဝိညာဉ်ရေးနိမိတ်များကိုအနက်ဖွင့်ရန်လုံလောက်သောပညာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတစ်ခုစီ၏ဇာတ်လမ်းသည်အလွန်ကောင်းသောစွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတိရစေသည်။
* ဒီပုံပြင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရဲစွမ်းသတ္တိရှိရှိဆင့်ခေါ်လာတဲ့အခါရလဒ်ကအမြဲတမ်းအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတယ်၊ ဘယ်တော့မှငါတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိအကျမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရာများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ယောင်နိုင်သမျှအရာအားလုံးထက်ပိုသည်
* ဤစာအုပ်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော၊ ဖတ်ရန်လွယ်ကူပြီးတန်ဖိုးရှိသည့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်အဓိကလမ်းဖြင့်ဘဝလမ်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းရန်လိုအပ်သောငွေကြေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကိုလန်းဆန်းစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » Audio » Paulo Coelho မှ« Alchemist »အော်ဒီယိုစာအုပ်ကို
Jorge Alberto Quispe Mancilla ဟုသူကပြောသည်
Jorge Alberto Quispe Mancilla အားပြန်ပြောပါ
စန်ဒရာ Fana Rojas ဟုသူကပြောသည်
Sandra Fana Rojas အားပြန်ပြောပါ
Abel garza ဟုသူကပြောသည်
Abel Garza သို့ပြန်သွားပါ
Vicktor grefa ဟုသူကပြောသည်
ငါအရမ်းကောင်းတယ်ကြားတယ် ... ငါအရမ်းအကြံပြုလိုတယ်
Vicktor Grefa ကိုစာပြန်ပါ
ခရစ္စတိုဖာ Yedra ဟုသူကပြောသည်
Cristopher Yedra အားပြန်ပြောပါ
ပါပလော Yanez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ငါက Internet Explorer မှာနားထောင်နေတယ်၊ အလွန်ကောင်းသောအလှူငွေနှင့်အလွန်ကောင်းသောစာအုပ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
မာရီယာဟိုဆေး M ကဖာနန်ဒက် ဟုသူကပြောသည်
Maria Jose M Fernandez အားပြန်ပြောပါ
ဒန် Alejandra ဟုသူကပြောသည်
ငါလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကဖတ်ခဲ့တယ်။ အခုကြားရတာအရမ်းပျော်တယ်
Dan Alejandra အားပြန်ကြားပါ
Yenny ပက်ထရီရှာ ဟုသူကပြောသည်
Yenny patricia အားပြန်ပြောပါ
ricardo alberto ponce sosa ကိုပြန်ပြောပါ
Rengifo David Acosta ဟုသူကပြောသည်
hehehehehe ကြီးလှတယ် ... ငါဖတ်ပြီးပြီအခုငါကြားရပြီ
Rengifo David Acosta သို့ပြန်သွားပါ
အမှန်တရားကတော့လှပပြီးအရမ်းကောင်းတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါက Self- အကူအညီနှင့်ဒphilosophနအပိုင်း၌ခွဲခြားလိမ့်မယ်။ အချိန်ဖြုန်းတီးနေသော Alchemist ကိုမဖတ်သူတိုင်းအားကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုပြီးသည်နှင့်သင်နောင်တမရနိုင်သောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
Daniela Rivera ဟုသူကပြောသည်
Daniela Rivera အားပြန်ကြားပါ
Sarai ၏ဘလော့ဂ် ဟုသူကပြောသည်
Sarai ၏ Blog သို့ပြန်သွားပါ
ကာမဲန် Martinez ဟုသူကပြောသည်
Carmen Martinez အားပြန်ကြားပါ
Adrian perez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကောင်းသောနေ့၊ အလွန်အောင်မြင်သော၊ ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်မည်လဲ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ NAMASTE ။
Adrian Perez အားပြန်ပြောပါ